चीन ढिलो गति प्लास्टिक Granulator निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Aumax
घर > उत्पादनहरु > प्लास्टिक Granulator र श्रेडर > ढिलो गति Granulator > ढिलो गति प्लास्टिक Granulator
ढिलो गति प्लास्टिक Granulator: इंजेक्शन मोल्डिंग को समयमा उत्पादित नोजल सामग्री तुरुन्तै कुचल, सुकेको, धुलो बाहिर sieved जब बाहिर निकालीन्छ, र रिसाइकिलिंग को लागी नयाँ सामग्री संग मिसाइएको छ। प्लास्टिक शक्ति, तनाव, र color र चमक को भौतिक गुणहरु लाई नोक्सल सामाग्री को ओक्सीकरण र गीला को कारण बाट बच्न को लागी बच्न को लागी, ताकि गठन उत्पादन को गुणवत्ता मा सुधार गर्न सकिन्छ। यसले अपशिष्ट र कच्चा माल, श्रम, व्यवस्थापन, गोदाम, र प्लास्टिक सामाग्री को खरीद को हानि, र लागत घटाउन सक्छ।
1. ढिलो गति प्लास्टिक Granulator परिचय
इंजेक्शन मोल्डिंग को समयमा उत्पादित नोजल सामग्री तुरुन्तै कुचल, सुकेको, धुलो बाहिर sieved जब बाहिर निकालीन्छ, र रिसाइकिलिंग को लागी नयाँ सामग्री संग मिसाइएको छ। प्लास्टिक शक्ति, तनाव, र color र चमक को भौतिक गुणहरु लाई नोक्सल सामाग्री को ओक्सीकरण र गीला को कारण बाट बच्न को लागी बच्न को लागी, ताकि गठन उत्पादन को गुणवत्ता मा सुधार गर्न सकिन्छ। यसले अपशिष्ट र कच्चा माल, श्रम, व्यवस्थापन, गोदाम, र प्लास्टिक सामाग्री को खरीद को हानि, र लागत घटाउन सक्छ।
AMG-E श्रृंखला ढिलो गति प्लास्टिक Granulator मिसिनहरु प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को छेउमा मोल्ड धावक स्प्रु बर्बाद सामग्री र दोष उत्पादनहरु को लागी स्थापित गरीन्छ। ब्लोअर र चक्रवात प्रणाली संग सुसज्जित मेशिन तुरुन्तै इंजेक्शन मेशिन मा कुचल सामग्री ढुवानी गर्न को लागी।
2. ढिलो गति प्लास्टिक Granulator प्यारामीटर (निर्दिष्टीकरण)
1) अधिकतम कुचल उत्पादन सामाग्री गुणस्तर र खुवाउने आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ।
2) AMG-E श्रृंखला कम गति प्लास्टिक Granulator स्क्रीन रहित प्रकार छ, मेशिन छलनी जाल बिना छ।
3) चलिरहेको शोर विविध shredding सामग्री मा निर्भर गर्दछ।
3. ढिलो गति प्लास्टिक Granulator सुविधाहरु र आवेदन
१) ढिलो गति स्क्रीन रहित प्लास्टिक granulator कम गति मा टेबल granulating संग काम।
2) कुचल कोठा कास्टिंग द्वारा बनाईएको छ, जो लुगा प्रतिरोधी र टिकाऊ छ।
3) सदमे अवशोषित स्टील प्लेट र ध्वनि इन्सुलेशन डिजाइन को उपयोग धेरै शोर कम गर्दछ।
4) कटर गियर hobbing कटर अपनाउँछ, कुचल कणहरु छन् र लगभग कुनै पाउडर, जो सामाग्री को तत्काल पुन: उपयोग को लागी सुविधाजनक छ। यो विशेष गरी कुचल र विभिन्न हार्ड ईन्जिनियरि plastic् प्लास्टिक रड को उत्थान को लागी उपयुक्त छ।
5) उच्च ध्यान सुरक्षा को लागी भुक्तान गरिएको छ, र सीमा सुरक्षा स्विच खुल्ला र अन्य स्थानहरुमा स्थापित छन्।
6) सुविधाजनक सफाई विधि, संकुचित हावा सफाई पोर्ट संग मेशिन को मुक्त उद्घाटन।
4. ढिलो गति प्लास्टिक Granulator विवरण
AMG-E श्रृंखला प्रेस प्लास्टिक granulator को छेउमा ढिलो गति screenless इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को छेउमा र नोजल प्लास्टिक सामाग्री रिसायकल को लागी राखिएको छ, जो धेरै उत्पादन लागत घटाउँछ। एकै समयमा, नोजल सामग्री र बचेको सामग्री पर्यावरण संरक्षण प्राप्त गर्न को लागी पुनर्नवीनीकरण गरीन्छ; यदि पुनर्चक्रण उपकरण एक रोबोट संचालन संग सुसज्जित छ, यो आवश्यक म्यानुअल अपरेशन छैन, जबकि श्रम लागत बचत। मेशिन साइड मध्यम गति कोल्हू क्रश र प्लास्टिक स्क्रैप, पुनर्नवीनीकरण सामग्री, र अर्द्ध तैयार उत्पादनहरु सहित विभिन्न प्लास्टिक सामाग्री, पुन: उपयोग को लागी उपयुक्त छ। यो विभिन्न नरम र कडा पाना प्लास्टिक जस्तै नरम क्लोरीन, polycarbonate, नायलॉन, ABS, आदि, शाखा आकार, मेष प्लास्टिक को लागी उपयुक्त छ। मेशिन संरचना मा कम्प्याक्ट, उपस्थिति मा सुन्दर, र संचालित गर्न सजिलो छ। घुमाउने चाकू को अनुकूलित डिजाइन ऊर्जा को खपत कम गर्दछ र दक्षता काटने बढ्छ।
5. ढिलो गति प्लास्टिक Granulator योग्यता
सामान्यतया, हाम्रो प्लास्टिक मिसिनहरु को वितरण समय १०-२० दिन अर्डर पुष्टि र अग्रिम भुक्तानी पछि हो। ढिलो गति प्लास्टिक granulator मिसिन प्लाईवुड मामलाहरुमा प्याक गरीन्छ। सामान्यतया, हामी LCL वा FCL महासागर ढुवानी द्वारा ठूला मिसिनहरु जहाज। कहिलेकाँही, ग्राहकहरु लाई तत्काल मेशिन को आवश्यकता छ, हामी हावा वा एक्सप्रेस बाट मेशिन जहाज
हट ट्याग: ढिलो गति प्लास्टिक Granulator, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, चीन, गुणस्तर, सीई, उन्नत, किन्नुहोस्, मूल्य